Apple inomira kusaina iOS 15.0.1 | IPhone nhau
Apple inomira kusaina iOS 15.0.1
Apple yakamira kusaina yekutanga kuburitswa neruzhinji kweIOS 15 kutanga kwaGumiguru. Mazuva makumi maviri gare gare, iyo Cupertino-yakavakirwa kambani ingorega kusaina iOS 15.0.1, zvinoreva kuti vashandisi vakavandudza zvishandiso zvavo kuIOS 15.0.2 kana iOS 15.1 havachakwanise kudzikira kuIOS 15.0.1.
iOS 15.0.1 yakaburitswa kune vashandisi muna Gumiguru 1 kugadzirisa bhagi iyo yaidzivirira vashandisi kubva kiinura iPhone 13 mhando uchishandisa iyo Apple Tarisa kuvhura basa. Asi raisave iro chete dambudziko rakatarisana nevashandisi vekutanga kugadzirisa kune iOS 15.0.
Yakagadzirisawo nyaya yakakonzera iyo App yezvirongwa kuratidza zvisirizvo izvo chengetedzo yemidziyo yakanga yakazara. Mazuva mashoma gare gare, Apple yakaburitsa iOS 15.0.2 iine akawanda mabug fixes.
Parizvino, Apple yanga ichiedza iOS 15.1 kwemavhiki mashoma, vhezheni iriko parizvino iri mubeta nhamba 4, vhezheni ichawedzera iyo SharePlay basa uye ProRes vhidhiyo codec ye iPhone 13 Pro uye iPhone 13 Pro Max vashandisi.
iOS 15.1 ichaburitswa muna Gumiguru 25, pamwe neyekupedzisira vhezheni yeMacOS Monterey, kunyange zvakasimbiswa naApple kutanga kwaNyamavhuvhu, SharePlay mashandiro haazove achiwanikwa kusvika kudonha.
Izvo zvinoitika neiyo Universal Control basa, chiitiko chingave chisingawanikwe nekuvhurwa kweMacOS Monterey.
Shanduro dzekare hadzichagone kuiswa
Kudzokera kune yekare iOS inovaka ndiyo chete mhinduro vashandisi vanayo kana mushure mekuvandudza, yavo terminal inotanga kusashanda sezvayaifanira. Kana iwe uri mumwe wevashandisi ava, uye iwe usina kudzikisira panguva iyoyo, chinhu chete chaunogona kuita izvozvi mirira kuburitswa kweIOS 15.1.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 15 » Apple inomira kusaina iOS 15.0.1
Iyo Apple yekuchenesa Cloth ndeye hombe hit! Yepedyo kununurwa muna Zvita
13x08 Podcast: Nyowani MacBook Pro, HomePod uye Airpods